Telefishinnada - LaComparación
Jilayaasha Waxyaabaha qalaad waxay rabaan inay kula daawadaan xilli ciyaareedka 4 dhamaadka adiga: waa kan sida
(*4*)Taageerayaasha Waxyaabaha shisheeye, ku farxa! Netflix ayaa ku dhawaaqday xaflad daawasho toos ah oo online ah oo loogu talagalay xilli ciyaareedka 4-aad ee dhamaadka bandhiga sci-fi, qof walbana waa lagu casuumay. (*4*) Iyadoo lala kaashanayo...
HBO Max wuxuu soo bandhigay mustaqbalka Netflix uu filan karo
Netflix waxa ay qorshaynaysaa in ay soo bandhigto qiime jaban, oo ay taageerto xayaysiisyada mustaqbalka dhow, iyo haddii guusha heerka u dhigma ee HBO ay tahay wax lagu socdo, durduriyuhu waxa uu leeyahay guulaysta. Sahan uu dhawaan sameeyay Insider (wuxuu ku furmay mid cusub...
TV-yada 4K ee xiisaha leh ee Samsung ee XNUMXK micro-LED ayaa ugu dambeyntii ku imanaya cabbirro yaryar
Waxaan dhawaan soo sheegnay in hormoodka Samsung TV-yada micro-LED, tignoolajiyada soo socda ee bixiya dhammaan faa'iidooyinka isbarbardhigga ee TV-yada OLED, oo leh cimriga dheer iyo iftiinka sare ee TV-yada LED, ay ku jiraan aragti... .
7 filimaan cusub iyo bandhigyo TV oo ku saabsan Netflix, Prime Video, HBO Max, iyo in ka badan isbuucaan (June 24)
Ka dib dalaggii furaha ahaa ee usbuucii hore ee ka yimid adeegyada qulqulka, Netflix wuxuu ku soo laabanayaa iftiinka isagoo wata laba wax soo saar oo caan ah oo magacyadoodu ay hubaan inay ku dhufan doonaan bogga isbeddelka ee Twitter ee ...
Daawo trailer buuxa oo qaboojinaya oo ah Stranger Things 4: Volume 2
Muuqaalka buuxa ee qaybta labaad ee Stranger Things Season 4 ayaa soo gaadhay online. Hoos guji si aad u daawato: Qaybta labaad ee bandhigga xilli ciyaareedkii afraad wuxuu imanayaa Netflix 1-da Luulyo. Inkasta oo lagu dhawaaqay mugga labaad, ayaa...
7 filimaan cusub iyo bandhigyo TV oo ku saabsan Netflix, Prime Video, HBO Max, iyo in ka badan isbuucaan (June 17)
Nasasho naadir ah oo leh caado, todobaadkan imaatinka qulqulka ayaa ah kuwa aan dab qabadsiinin internetka. Tani waxay u ekaan kartaa dib u eegis, laakiin xaqiiqdii waa wax lagu farxo in la qaato sabtida iyo axada iyada oo aan cadaadis la saarin in la daawado filimadii ugu dambeeyay ama...